Cristiano Ronaldo Oo Ilaalo Looga Dhigay Mataano Ka Soo Dagaalamay Afganistan – Heemaal News Network
Cristiano Ronaldo Oo Ilaalo Looga Dhigay Mataano Ka Soo Dagaalamay Afganistan
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo iyo qoyskiisa ayaa waxa ilaaliye ay ka dhigteen laba askari oo ka tirsan ciidamadii gaarka ahaa ee kasoo dagaallamay waddanka Afghanistan, kuwaas oo laacibkan iyo xaaskiisaba meel walba oo ay tagaan la socda.
Labadan askari ee walaalaha ah ayaa lagu arkay iyagoo la socda Ronaldo bishii September xilli uu isku diyaarinayey kulankii Portugal iyo Switzerland, waxyar kaddibna waxay qayb kala noqdeen safarro uu xataa la galay ciyaartoyda kooxda Manchester United oo Champions League dibedda ugu baxay.
Mid ka mid ah labadan askari ee mataanaha ah ayaa bishii hore waxa lagu arkay magaalada Madrid ee waddanka Spain isaga oo la socda xaaska Cristiano Ronaldo ee Georgina Rodriguez oo iyada oo xaamilo ah xaflad u qabanaysay inantooda Alana Martina.
Toddobaadkan ayaa sidoo kale labadan nin ee xoogga weyn oo lagu magacaabo Sergio iyo Jorge Ramalheiro, waxa lagu ag sawiray laacibka reer Portugal iyagoo u ilaalinaya sidii nin siyaasi ama madax ah oo ka baqaya in waxyeello la gaadhsiiyo.
Sergio iyo Jorge Ramalheiro oo kaliya lagu sheegay inay ka mid ahaayeen cutub khaas ah oo loo diray Afghanistan, haddana lama xaqiijin inay illaa hadda yihiin askar kayd ah iyo inay si rasmi ah shaqadaas uga tageen.
Wargeyska Flash ee kasoo baxa waddanka Portugal oo dadka caanka ah wax ka qora, ayaa waxa uu labadan nin ku sheegay inay yihiin kuwo si caadi ah dadka ugu dhex jira oo aan laga garanin inay waardiyeyaal yihiin, laakiin haddana feejigan oo marka ay wax dareemaan si cajiib ah u hawlgeli karaya.
Ciyaartii Champions League ee Manchester United ay u tagtay Young Boys, waxay labadan nin qayb ka noqdeen safarka kooxda oo ay u raaceen Switzerland.
Sida ka muuqata, ma isticmaalaan wax hub ah, hase yeeshee waxay takhasus ku yihiin ciyaaraha legdinta iyo laadka iskugu jira ee MMA oo ah midda uu feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib adduunyada ku qabsaday sannadihii tegay.
Raisal Wasaraaha Faransiiska Oo Kaaratiin La Galiyey
Maraykanka: khatrata Hubka Biology-gu Waa Dhab
Heemaal November 14, 2021 November 14, 2021